Izindawo Zamahhala Zekhuphoni - Amakhodi Ebhonasi Yekhasino aku-inthanethi
Izindawo Zamakhhuphoni zamahhala
Posted on July 29, 2019 August 19, 2019 Umbhali Andrew	Amazwana Off kumaSayithi weKhuphoni lamahhala
Sonke ngeke siphikisane nokonga amadola ambalwa ezintweni esifuna ukuzithenga. Kungakho amakhuphoni wesaphulelo nezinhlelo zokusebenza zamakhuphoni aziwa kakhulu. Uma iminyaka eminingana edlule, bekufanele sikhiphe amakhuphoni kumaphephandaba noma kumamagazini endawo, manje sinamawebhusayithi amaningi anikeza zonke izinhlobo zezaphulelo. Futhi akunzima ukuzuza kubo: vele ubhalise i-akhawunti bese uqala ukonga imali! Ake sibheke izinsiza zesigqebhezana eziheha abathengi abaningi.
I-215 yama-spins amakhasino eTreasure Island Jackpots (Sloto Cash Mirror)
Ngubani ongeke afune ukonga amadola ambalwa lapha nalaphaya?
Amakhuphoni wendabuko ngokuqinisekile angasiza ekwehliseni izindleko zakho, kepha kungaba yinkinga ukusebenzisa. Ukugoqa amakhuphoni nokuhlela uhambo lokuthenga kungathatha amahora amaningi, okwenza abanye abantu bayeke ngokuphelele amakhuphoni. Ngenhlanhla, kunezindlela ezilula zokugcina ngaphandle kokuhlunga ngezinkulungwane zamakhuphoni isonto ngalinye. Namuhla, ungathola amakhuphoni edijithali yemikhiqizo oyidingayo. Lawa masayithi wesigqebhezana empeleni kulula ukuwasebenzisa futhi angakusindisa ngokushesha imali ngaphandle komzamo omkhulu kuwe.
Yini isiza isigqebhezana?
Sonke siyazi ukuthi siyini isigqebhezana — bebekhona amashumi eminyaka. Kodwa-ke, okuhlukile namuhla ukuthi ungakuthola kanjani. Ngenkathi wake wadlula ezitolo, waphrintwa emaphephandabeni, noma wathunyelwa ebhokisini lakho leposi, manje ungazithola ku-inthanethi. Amasayithi amakhuphoni anikezela ukufinyelela okulula kwamakhuphoni nezinye izindlela zokonga online.
I-casino ibhonasi ayikho idiphozi 2019:
I-25 ayikho ibhonasi yediphozithi ku-Deal noma Cha Deal Spins Casino
I-125 mahhala i-spins ibhonasi ku-Slots.lv i-Casino
I-30 mahhala ayikho ibhonasi ye-casino ediphithi e-British Casino
I-35 mahhala ayikho ibhonasi ye-casino ye-deposit e-EuroLotto Casino
I-80 yamahhala i-spin casino e-ExtraSpel Casino
I-115 spins yamahhala e-SCasino
I-65 yamahhala i-spin bonus e-Pantasia Casino
I-165 ayikho ibhonasi ye-casino yediphozithi ku-Caribic Casino
I-80 ayikho ibhonasi ye-deposit eRicardos Casino
I-75 spins yamahhala e-ahaCasino
I-160 i-spins yamahhala ku-Slots500 Casino
I-55 ayikho ibhonasi ye-deposit ku-Slots Inferno Casino
I-155 mahhala ayikho ibhonasi ye-casino ye-deposit eMamamia Casino
I-45 yamahhala ihlola ibhonasi yekhasino ku-JenningsBet Casino
I-155 ayikho ibhonasi ye-deposit ku-24hBet Casino
I-20 mahhala ayikho ibhonasi yephoyisithi ku-Lucky31 Casino
I-95 yamahhala i-casino e-24Bettle Casino
I-95 yamahhala i-casino ku-EveryGame Casino
I-85 mahhala ayikho ibhonasi ye-deposit ku-MrRingo Casino
I-75 yamahhala ihlola ibhonasi yekhasino ku-Svenskalotter Casino
I-30 yamahhala i-spin casino eLeijonaKasino Casino
I-15 mahhala ayikho ibhonasi yediphozi e-Spinsvilla Casino
I-120 yamahhala i-casino e-Drake Casino
I-90 mahhala ayikho ibhonasi yediphozithi eKesars Casino
I-140 yamahhala e-Vics Bingo Casino
1 I-215 yama-spins amakhasino eTreasure Island Jackpots (Sloto Cash Mirror)
1.1 Ngubani ongeke afune ukonga amadola ambalwa lapha nalaphaya?
1.2 Yini isiza isigqebhezana?
4 I-casino ibhonasi ayikho idiphozi 2019: